Puntland iyo Somaliland oo Wada Cambaareeyey Qaraxyadii Ismiidaaminta Ahaa
Warsaxaafadeed kasoo baxay maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa lagu cambaareeyey qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee uu shalay galab ka badbaaday Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
War qoraal ah oo kasoo baxay Madaxtooyada Puntland oo uu saxaafadda u akhriyey Afhayeenka Madaxtooyada Puntland Axmed Cumar Libaax Joorre ayaa waxaa lagu sheegay in Puntland ay ka xun tahay isla markaana cambaarayso qaraxyadii shalay galab ka dhacay magaalada Muqdisho.
Puntland waxay sheegtay in qaraxyadaasi ay geysteen argagixisada Soomaaliya oo ay ula jeedeen Al shabaab oo sheegtay masuuliyada weeraradii shalay galab ka dhacay magaalada Muqdisho.
Warsaxaafadeedka ay soo saartay Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in ay diyaar u tahay ladagaalanka Al shabaab oo ay horay ula soo dagaalantay isla markaana ay iminka Dowladda cusub ka gacan siin doonto.
Dhanka kale maamulka Somaliland ayaa soo saaray warsaxaafadeed uu ku cambaareenaayo qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee lala eegtay Hotel uu ku sugnaa Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Proff. Xassan Sheekh Maxamuud.
Warka kasoo baxay wasaaradda arimaha dibadda maamulka Somaliland ayaa lagu sheegay in shacabka Somaliland iyo maamulkiisa ay si aad ah uga xun yihiin qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee lagu doonaayey in lagu khaarijiyo Madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Fedraalka ah ee Soomaaliya iyo masuuliyiin la socotay .
Maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa waxay qayb ka noqonaayaan dhinacyada cambaareeyey qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya.